The Legal Binding between you and A bank Digital Banking System
Your registration for receiving services shall be deemed as your designation of A bank digital banking system as your agent that will, on your behalf, provide as directed by you all kinds of services offered by A bank digital banking system, but not limited to the provision of A bank services.
Disclose Information– If A bank is required to disclose financial information or transactions related to the use of the Service by any governmental or competent authorities per legal provisions, orders or regulations, the User agrees to allow A bank to disclose such information and/or if requested prepare any report on relevant information and/or financial transactions of the User for submission to those authorities for the benefit of the transaction process/the usage of the Service in Terms and Conditions. The User acknowledges A bank to conduct the User’s financial transaction to those authorities in all respects.
Collect, Store and Use Information– The User agrees and consents to the bank to collect and use information given to the bank, or provided through the bank, to obtain and use information already available to the bank or as the bank has received directly or indirectly from other sources, for the purpose of providing services or fulfilling the requested of applicant before providing the services or assigning to third parties in order to support the services, in regard to, including but not limited to information technology, communications, collection and/or any other tasks, assignment of right and/or obligation, legal compliance, risk management, compliance control, internal administration, solving complaint and/or for other purpose necessary to the operations of the bank, or for the bank to provide the services equitably and continuously. The User further agrees and consents to the bank to disclose its information to the bank’s agents, the sub-contractors, co-branding alliances, data processors, auditors, external auditors, credit information company, credit rating agencies, asset management companies, prospective assignees, assignees, legal authorities, and/or any entities, organizations or juristic persons having an agreement with the bank, and also agrees and consents to the aforementioned parties whom receiving information from the bank to collect, use and disclose such information for the same purposes, and to send, and/or transfer the information to be stored in server/cloud.
အီလက်ထရွန်နစ်ဘဏ်လုပ်ငန်း စနစ် (Digital Banking System) အတွက် သုံးစွဲသူ သဘောတူညီချက်
ဤသုံးစွဲသူ သဘောတူညီချက်သည် အီလက်ထရွန်နစ် ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ် (Digital Banking System) သုံးစွဲရန်အလို့ငှာ သုံးစွဲသူ (သင်)နှင့် A bank တို့အကြားတွင် ချုပ်ဆိုသည့် သဘော တူညီချက်ဖြစ်သည်။ဤသဘောတူညီချက်သည် သင်၏ ရပိုင်ခွင့်များအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမည် ဖြစ်သောကြောင့် ထိုအရာကို သေချာစွာဖတ်ရှုပါ။ ၎င်းတွင် ပါရှိချက်များအကြောင်း အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက A bank ထံသို့ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ အီလက်ထရွန်နစ် ဘဏ်လုပ်ငန်း စနစ် (Digital Banking System) ကို စတင်သုံးစွဲသည်နှင့် သင်သည် A bank ၏ အီလက်ထရွန်နစ် ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ် (Digital Banking System) ဆိုင်ရာ မူဝါဒများနှင့် ၎င်းတို့နှင့် ဆက်စပ်နေသော မှီငြမ်းဖွယ်ရာ စာချုပ်စာတမ်းများအား သဘောတူလိုက်နာမည်ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူမည်ဖြစ်သည်။ ဤသဘောတူညီချက်သည် ဥပဒေနှင့်အညီ သင်နှင့် A bank အကြားချုပ်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ကာ သင်သည် တရားဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားခြင်း ဖြစ်သည်။
သင်နှင့် A bank ၏ အီလက်ထရွန်နစ်ဘဏ်လုပ်ငန်း စနစ် (Digital Banking System) အကြား တရား ဥပဒေ ကြောင်း အရ ခိုင်မြဲစည်းနှောင်ထားသည့်သဘောတူညီချက်
သင်သည် ဤဝန်ဆောင်မှုများရယူရန် စာရင်းပေးသွင်းခြင်းဖြင့် A bank ကို သင်၏ အီလက်ထရွန်နစ် ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ် (Digital Banking System) ဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုရာရောက်သည်။ ထိုသို့ဆိုရာတွင် အီလက်ထရွန်နစ် ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ် (Digital Banking System) ဖြင့်ပေးအပ်သောဝန်ဆောင်မှုများအားလုံးပါဝင်ကာ ဘဏ်ဝန်ဆောင်လုပ်ငန်းများတည်းသာဟုကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိစေရပါ။
၁၈။ အချက်အလက်များထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုခြင်း – အစိုးရ (သို့မဟုတ်)အခွင့်ရအာဏာပိုင်တစ်စုံတစ်ရာ တို့မှ ဥပဒေပြဌာန်းချက်များ၊ အမိန့်များ သို့မဟုတ် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအရ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် ငွေကြေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုဖြစ်စေ၊ အီလက်ထရွန်နစ် ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ် ဆောင်ရွက်မှု ကိစ္စရပ်များ ကိုဖြစ်စေ ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားရန် A bank သို့ စေခိုင်းလျှင် နှင့်/သို့မဟုတ် အီလက်ထရွန်နစ်ဘဏ်စနစ် ဆောင်ရွက်မှု ကိစ္စရပ်များမှ အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုများ နှင့်/သို့မဟုတ် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအတွင်း ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခြင်းကိစ္စရပ်များ အတွက် အဆိုပါအာဏာပိုင်များ ထံသို့ တင်သွင်းရန် သုံးစွဲသူ၏ ဆက်စပ်အချက်အလက်များ နှင့်/သို့မဟုတ် ငွေကြေး ဆိုင်ရာ အီလက်ထရွန်နစ် ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ် ဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်း နှင့်ပတ်သက်သော အစီရင်ခံစာကို ပြုစုပေးခြင်းအား တောင်းဆိုမှုများရှိလျှင် သုံးစွဲသူ မှ A bank သို့ သဘောတူခွင့်ပြုပါသည်။
– ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ရန်။ (သို့မဟုတ်)
– ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုများမပေးမီတွင် လျှောက်ထားသူ၏ တောင်းဆိုမှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးရန်။ (သို့မဟုတ်)
– သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဆိုင်ရာ၊ ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ၊ အချက်အလက်ကောက်ယူ စုဆောင်းမှုနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ၊ ရပိုင်ခွင့်နှင့် တာဝန်များကို လွှဲအပ်ခြင်း ဆိုင်ရာ၊ ဥပဒေနှင့်အညီဖြစ်ခြင်းဆိုင်ရာ၊ ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ၊ စည်းမျဉ်းများနှင့် ညီညွှတ်ခြင်းအတွက် ထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာ၊ ဌာနတွင်းစီမံအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ၊ တောင်းဆို တိုင်ကြားမှု ဖြေရှင်းရေးဆိုင်ရာနှင့် အခြားသော ကိစ္စရပ်များအပါဝင်ဖြစ်သော ဝန်ဆောင်မှုများ ကို ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် တတိယပုဂ္ဂိုလ်သို့ လွဲအပ်စေခိုင်းရန်။
– ဘဏ်လုပ်ငန်းများဆောင် ရွက်ရေးအတွက် မရှိမဖြစ်သောအခြား ကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ရန်။
– ဘဏ်သည်ယင်း၏ဝန်ဆောင်မှုများကို မျှတစွာနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်။